सगुन डटकममा लगानी गर्ने समय घर्किदै - Everest Dainik - News from Nepal
सगुन डटकममा लगानी गर्ने समय घर्किदै
सुसान आचार्य /युएई, मंसिर १२ । पेन्टागन को १२ बर्षे लामो जागिर छाडेर आफ्नो जन्म भुमी लाई विश्व सामु चिनाउन लागिपरेका छन् ‘गोबिन्द गिरि’ , उनै गोबिन्द गिरि जसले पेन्टागन को जागिर छाडेर नेपाल र नेपाली लाई विश्व सामु चिनाउन मात्रै होइन आर्थिक स्तर उन्नती को निम्ति लागि परेका छन् ।
पेन्टागन मा सिस्टम इन्जिनियर को रुपमा लामो अनुभव बटुलेका गिरि अब आफ्नै देश र जनताको लागि केही गरौं भन्ने सोचले जागिर छाडेको बताउछन् !
गोबिन्द गिरि उनै ब्यक्ती हुन जसले गुगल , फेसबुक , विच्याट जस्ता हाइटेक कम्पनी हरुलाइ चुनौती दिन ‘सगुन डटकम’ मार्फत विश्व भर छरिएका नेपाली हरु माझ आएका छन् ।
अमेरिकी नियामक सेक्युरिटी एक्स्चेन्ज कमिसन (एसइसी) एक्सचेन्जबाट मिनी आइपिओ जारी गर्न अनुमति पाएको सगुनले यतिबेला ग्लोबल मार्केटमा सेयर विक्री गरिरहेको छ । अमेरिकामा बस्ने नेपालीले स्थापना गरेको आइटी स्टार्ट अप कम्पनी सगुनले निस्कासन गरेको मिनी गुगल , फेसबुक जस्तै नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनी ‘ सगुन ‘ को शेयर अन्तिम चरणमा आइपिओमा विश्व व्यापीरूपमा नेपालीहरूले लगानी गर्ने अबसर अव केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ |
अमेरिकन जब्स एक्ट २०१२ अन्तर्गत रहेर सेयर जारी गर्ने सगुन एसियाकै पहिलो कम्पनी हो । संखुवा सभाका गोबिन्द गिरीले प्रवर्धन गरेको सगुनले अमेरिकाबाट ग्लोबल सेयर मार्केटमा लगानी गर्न पाउनु अभूतपूर्व अबसरको रुपमा समेत हेरिएको छ ।
सगुन डटकमका संस्थापक नेपाली भएको भन्दै प्रवासी नेपालीलाई यसमा लगानीको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ | कुनै समय अमेरिकाको पेन्टागनमा आइटी विज्ञको रुपमा काम गरेका गोबिन्द गिरि सगुनका संस्थापक हुन |
याे पनि पढ्नुस अनशन शुरु गर्ने तयारीमा डा. केसी
के हो सगुन ?
आइटीका ठूला कम्पनीहरु फेसबुक, अलिबाबा, उबर, गुगल, ट्विटर दर्ता भए झैँ अमेरिकाको डेलावयर स्टेटमा सगुन इंन्कको नाममा दर्ता भएको आइटी कम्पनी हो । सोसिएल इकमर्सको रुपमा अगाडी बढ्दै गरेको सामाजिक सञ्जाल नै सगुन हो ।
क्राउण्ड फन्डिङ अन्तर्गत विश्वभरीबाट सगुनको बृद्धि बिकासको लागि लगानी जुटाउँदै आएको छ ।
अमेरिकन कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्ने देशहरुबाट लगानी गर्न सकिने छ । जब्स एक्टले रिक्स लिन सक्ने स-साना लगानी कर्ताहरुलाई समेत बार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न छुट दिए संगै लगानीको अवसर विश्वभरिका साना लगानीकर्ताले पाएका हुन् ।प्रोफेसनल इन्भेष्टर तथा संस्थागत लगानीमा कुनै रोकटोक नरहेको बताइएको छ ।
त्यसमा पनि थोरै रकम बचाउनेहरुका लागि पहिलो पल्ट यसरी लगानी गर्ने अबसर आएको छ । सगुनले आइटीको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना बोकेको छ । सगुनको जस्तै अबस्था पार गरेका फेसबुक, ट्वीटर अहिले कहाँ पुगे भन्ने सबैका सामु छ ।
सगुनले मिनी आइपिओबाट २ अर्ब रुपैयाँ बराबर जुटाउने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म विश्वभरी रहेका २ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले लगानी गरिसकेका छन् । सगुनले सेयर निस्कासन गरेयता यसै साता सम्ममा ३२ करोड रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली अगुवाहरुले यसमा लगानी गरेका छन् । यही नोभेम्बर महिनाभर कम्पनीले सेयर निस्कासन खुल्ला राख्ने जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस फोरमले धोका दियाे : राजपा
कसरी कतीसम्म लगानी गर्न सकिन्छ ?
सगुनको इन्भेष्ट पेज www.sagoon.com/invest मा भएको फर्म भरेर डेबिट/क्रेड्रिट कार्ड तथा आफ्नो बैंक खाताबाट वायर ट्रान्फर गरेर सगुनमा लगानी गर्न सकिन्छ । सगुनको आइपिओमा नेपालबाट भने लगानी गर्न सकिन्न । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी लैजान रोक लगाएको छ । तर बिदेशमा बैंक खाता भएका गैर आवासिय नेपालीहरुले भने बिदेशबाट लगानी गर्न सक्नेछन ।
मिनि आइपीओमा सगुनले प्रतिकित्ता २३ डलर दरका सेयर निस्कासन गरेको छ । ब्यक्तिको हकमा भने अमेरिकन जब्स एक्टले बार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न छुट दिएको छ ।ब्यक्ति वा संस्थाले कम्तीमा १ हजार डलरको सेयर किन्न सक्छन् ।
कसरी गर्ने आवेदन ?
सगुनमा लगानी गर्न www.sagoon.com/invest मा गएर इन्भेस्ट बटम थिचेपछि त्यहाँ रहेको फर्मलाई चरणवद्दरूपमा भर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ। अमेरिकामा बस्नेहरुका लागि इलेक्ट्रोनिक चेक, चेक मेल गरेर, क्रेडिट/डेविट कार्डमार्फत र वायर ट्रान्सफर गरेर सगुनलाई रकम पठाउने सुविधा हुन्छ । अमेरिकाबाहेकका अन्य मुलुकबाट भने क्रेडिट/डेविट कार्ड र वायर ट्रान्सफर गरेर मात्र लगानी गर्न सकिनेछ ।
व्यक्तिगत/संस्थागत बिवरण भर्दा जिप कोड सहितको ठेगाना, मोवाइल नम्बर जन्ममिति लगायत भर्नु पर्नेछ ।साथै वार्षिक आम्दानी खुलाउनु पर्नेछ । बार्षिक २ लाख डलरसम्म आम्दानी गर्नेहरुले अमेरिकामा कमाइको १० प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसभन्दा बढी कमाइ गर्नेका लागि भने लगानी गर्ने रकमको सीमा तोकिएको छैन । अन्तमा कम्पनीसँग केही बुँदामा सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । सिक्नेचर भनेको ठाउमा आफ्नो पुरा नाम लेखेर हस्ताक्षर गर्न सकिने छ ।
त्यसपछि रकम तिर्ने क्रेडिट/डेविट कार्डको नम्बर, सुरक्षा नम्बरलगायतको विवरण फर्ममा भर्नुपर्छ । यसपछि रकम सगुनको सेयर निस्कासन प्रत्याभूती गर्ने कम्पनीको खातामा जान्छ ।बैंकबाट वायर ट्रान्फर गर्दा सगुनको इस्क्रो एकाउन्ड प्राइम ट्रष्ट एलएलसी मार्फत पठाउनुपर्ने छ।एकभन्दा बढी क्रेडिट कार्डबाट जोडर एकमुष्ट रकम पठाउन पाईने छैन ।
सगुनको इन्भेष्ट पेजमा भएको लाइभ च्याटबाट चौबीसै घण्टा नबुझेको प्रश्न सोध्न सकिने छ । सगुनले इन्भेष्टरहरुलाई सहज जानकारी दिन ग्राहग सेवा २४/७ खुल्ला रहने जनाएको छ ।
कहिले र कसरी प्राप्त हुन्छ सेयर प्रमाणपत्र ?
सगुनको सेयर खरिद गर्न पठाएको रकम प्राइम ट्रस्टको स्क्रो एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ रकम पुगेको जानकारी ३ देखि १० कार्य दिनभित्र इमेलमार्फत जानकारी प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि सेयर खरिदको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यति बेला नियमाक निकायले सम्पत्ति सुद्धिकरण, गैरकानुनी आर्जनलगायतको लगानी हो/हैन भनेर जाँच गर्छ । यसका लागि ३ देखि ५ हप्ता समय लाग्छ ।
नियामकको अनुसन्धान सकिएपछि सगुनले आफ्नो खातामा नगद प्राप्त गर्छ । त्यसपछि सगुनले सेयर प्रमाणपत्र जारी गरेर लगानीकर्तालाई पठाउँछ ।
ट्याग्स: 12 Aamaran Ansan